Tantara: Ny Fiandrasana tao Jerosalema - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
MPANARA-DIA an’i Jesosy ireo olona eto ireo. Nankatò azy izy ary nijanona tao Jerosalema. Ary raha mbola teo am-piandrasana niaraka izy rehetra, dia nisy feo nahery nameno ny trano manontolo. Sahala amin’ny rivotra mahery mifofofofo izany. Avy eo dia nisy lela nitarehin’afo nanomboka niseho teo ambony lohan’ny tsirairay tamin’ny mpianatra. Hitanao ve ny afo eo ambonin’ny tsirairay amin’izy ireo? Inona no hevitr’izao rehetra izao?
Fahagagana izao! Efa any an-danitra miaraka amin’ny Rainy i Jesosy, ary eo am-pandatsahana ny fanahin’Andriamanitra amin’ny mpanara-dia azy. Fantatrao ve izay nanosehan’io fanahy io azy ireo hatao? Nanomboka niteny tamin’ny ﬁteny samihafa izy rehetra.
Olona maro tao Jerosalema no nandre ny feo izay nitovy tamin’ny rivotra mahery, ary tonga mba hijery izay nitranga izy ireo. Ny sasany tamin’ny olona dia avy amin’ny ﬁrenen-kafa ary tonga tao noho ny andro ﬁravoravoana israelita atao hoe Pentekosta. Endrey ny hagagan’ireo mpitsidika ireo! Nandre ny mpianatra niteny tamin’ny ﬁteniny avy izy ny amin’ny zava-mahatalanjona nataon’Andriamanitra.
‘Avy any Galilia daholo ireo olona ireo’, hoy ireo mpitsidika. ‘Ahoana àry izy no mahay miteny amin’ny ﬁteny samihafa ampiasain’ireo tany niaviantsika?’
Nitsangana izao i Petera mba hanazava tamin’izy ireo. Nakariny ny feony ary nambarany tamin’ny olona ny fomba namonoana an’i Jesosy sy ny nananganan’i Jehovah azy tamin’ny maty. ‘Any an-danitra izao i Jesosy eo an-tanana ankavanan’Andriamanitra’, hoy i Petera. ‘Ary nandatsaka ny fanahy masina nampanantenainy izy. Izany no antony nahitanareo sy nandrenesanareo ireo fahagagana ireo.’
Eny, rehefa nilaza ireo zavatra ireo i Petera, dia maro tamin’ny olona no nanenina aoka izany ny amin’izay nataony tamin’i Jesosy. ‘Inona no tokony hataonay?’, hoy ny fanontanian’izy ireo. Hoy i Petera taminy: ‘Mila manova ny ﬁainanareo ianareo ary hatao batisa.’ Koa tamin’iny andro iny ihany dia olona tokony ho 3 000 no natao batisa ary tonga mpanara-dia an’i Jesosy.
Asan’ny Apostoly 2:1-47.
Araka ny tenin’i Petera ao amin’ny Asan’ny Apostoly 2:23, 36, inona no mampiseho fa ny ﬁrenena jiosy iray manontolo no tompon’andraikitra tamin’ny nahafatesan’i Jesosy? (1 Tes. 2:14, 15)